musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Carolina Cup Mutambo Unokwevera muPamusoro Paddle Surfers
Mukombe weCarolina mutambo wemazuva mana wezviitiko zvine marudzi manomwe, masemina nemakiriniki nezvakanaka, kuratidzira kwechigadzirwa uye kuratidzira.
"Mukombe weCarolina ndiyo chete musangano wepamutemo wePaddlesurf Professionals chiitiko muna 2021," akadaro Tristan Boxford, CEO weAPP. “Chiitiko ichi chinenge chiine madaro maviri pamwe nekumhanyisa nemari yemubairo yeAPA. "Zvisinei, nekuda kwemamiriro ezvinhu anoshamisa, hatisi kuenda kumberi neWorld Tour gore rino."
Iyo APP inozivikanwa uye inotemerwa seyepamutemo nyika mukwikwidzi kushanya kwekusimudza chikwambo neInternational Olympic Committee's Federation for Surfing Sports uye iyo International Surfing Association.
Inowanikwa munzvimbo mbiri dzemahombekombe egungwa uye kumahombekombe egungwa, marudzi ese uye zviitiko zvinotanga nekuguma paBlockade Runner Beach Resort, nzvimbo yekutandarira yeCarolina Cup. Zviitiko zvinotanga munaNovember 4 uye zvinopedzisa munaNovember 7.
Yakarongerwa yechipiri pasi rose mumadzimai ekumisikidza paddleboard, North Carolina yaApril Zilg yakazivisa zvirongwa zvekukwikwidza muCarolina Cup ine hutsinye-mamaira gumi nematanhatu Graveyard Race muWrightsville Beach. "Ndine hurongwa hwekumhanya munaNovember," akadaro Zilg. "Ndiyo imwe yemijaho mikuru kwazvo pasi uye ndeimwe yemakosi akaomesesa."
"Mujawo we" [Makuva] wakasiyana, uchitora iwe mukati megungwa uye Intracoastal mvura, uchifamba muzvikamu zviviri, uchirwisa mafungu, uye uchipinda nekubuda kuburikidza nemasaisai, "akadaro Zilg. “Muedzo wakanaka kwazvo weunyanzvi hwekukweva padanda, uye hunhu hwaamai hauwanzo kutamba hwakanaka. Kunze kwemamwe akatsaurwa-emakwikwi emakwikwi emahara, iyo Graveyard Race iri kumusoro uko kwekuomerwa, kunyanya kana iwe uchipedzisira uchirwisana nemafungu akaomarara. Iri futi hafu yemarathon, saka chigayo chaicho. ”
Vamwe vekutanga kupinda vanosanganisira Casper Steinfath, anotonga World Champion muchikamu chevarume. Kukura mumusha wehove muDenmark, Steinfath akatanga kuda mitambo yemvura asati afamba, akatasva bhodhi rebaba vake. Zvino makumi maviri nemasere, Steinfath ndemumwe wevatambi vemitambo yemvura yakanakisa, kuhwina kuhwina kwakawanda uye makwikwi panguva yebasa rake.
Muna 2020, Steinfath ndiye aive wekutanga kumira padanho rekupfuura Skagerrak, iyo makiromita zana nemakumi matatu emvura inonyengera inopatsanura Denmark kubva kuNorway.
Mufambi wechiFrench Arthur Arutkin, akagadzwa wechipiri pasi rose, uye Titouan Puyo weNew Caledonia, ari pachinhanho chechinomwe, vakasaina mumakwikwi - nevamwe vakawanda vari kuuya.
Seychelle Webster, anotonga World Champion muchikamu chevakadzi cheAPP, achaenda kuCarolina Cup uye anoronga kupa makiriniki, kuwanikwa kwemazuva ekuratidzira, uye kubatsira panguva yeVana Mujaho. "Ini handironge nezvemujaho gore rino," akadaro Seychelle. “Mukombe weCarolinai wakagara uri mumwe wemijaho yangu yepamusoro yegore. Asi parizvino, kukosha kwangu kukuru uye dambudziko rinonakidza nderekuti ndine nhumbu. Saka, ndizvo zvandatarisira gore rino, uye handisi kuzokwikwidza. ”
"Kukwikwidza kana kwete, vhiki ino muWrightsville ichave inonakidza kwazvo," akawedzera Seychelle. "Ndiri kufara kwazvo kuona nekubata munhu wese uye kutsigira APP neCarolina Cup kunyangwe paine matambudziko epasi rose."
Mukombe weCarolina wakarongeka neWrightsville Beach Paddle Club uye yakapihwa naKona Brewing Company. Sangano rakasarudzika reMukombe weCarolinaine Nourish North Carolina, 501 (c) (3) isina purofiti ine chinangwa chekupa chikafu chine hutano kuvana vane nzara, ichivagonesa kuti vabudirire mukirasi nenzvimbo dzavanogara.